सिएमसी काममा फर्किने भएपछि सचिवको भ्रष्ट ‘नियत’ ठहरै ! | Citizen Post News
सिएमसी काममा फर्किने भएपछि सचिवको भ्रष्ट ‘नियत’ ठहरै !
२०७५ पुस २४ गते १०:१३
काठमाडौं । ‘भुईँको खोज्दा पोल्टाको पोखियो’ जस्तो भएको छ यतिबेला खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमूख सूर्य कँडेललाई । इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी इसेमेन्टिसीती (सीएमसी) लाई कमिशन नपाउँदा भुक्तानी रोकेका दुवै उत्तानो परेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूका कारण तत्कालि ३५ करोड भुक्तानी गर्दा पुग्ने रकम अब ६० करोड नगरी सुखै छैन । कमिशन प्रकरणमा ठाकुरलाई ठेकेदार कम्पनीले ठहरै पारेको छ ।
सोमबार मन्त्रीसहित पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका सीइओसहितको बैठकमा उक्त रकम भुक्तानी नगरी नहुने दबाब मन्त्रालयलाई परेको छ । नत्र मेलम्ची गफमात्र हुने भएपछि सरकारको आलोचनामात्र होइन, बद्नामी बढ्ने निश्चित थियो । ठेकेदार कम्पनी काम गर्न राजी हुनुका पछाडी मन्त्रालय रकम भुक्तानीका लागि तयार हुनु हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठेकेदार कम्पनी भाग्न लागेको भनी गलत सूचना प्रवाह गर्दै राहदानी खोस्ने, ३० जना प्रहरी लगेर पक्राउ गरी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने काममा ठाकुर र कँडेलको मिलोमतो थियो । यो मिलोमतो विवाद निरुपण बोर्ड (डिआरबी)ले ठेकेदार कम्पनीलाई दिनू भनेको ३५ करोड रकम भुक्तानीका क्रममा कमिशनको विषय नमिलेपछि भएको थियो । ठाकुर र कँडेलले कम्तिमा ५ करोड कमिशन माग गरेको चर्चा चलेको थियो ।
रकम भुक्तानी नभएपनि सम्झौताको १६.२ नम्बर बुँदामा टेकेर सीएमसीले एकतर्फी हिसाबमा ठेक्का सम्झौता तोडेको पत्र मन्त्रालयमा पठाएपछि यो महाभारत बढेको थियो । डेढ महिनादेखि मेलम्चीको काम रोकिएको छ । जबकि, २७ माघमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनुपर्ने थियो । ठाकुरले मन्त्री बिना मगरलाई समेत मुछेर कमिशन मागमात्र गरेनन्, मन्त्री बदनाम गराउनका लागि तोकिएको मितिमा जसरी पनि पानी काठमाडौंमा ल्याउने भन्दै मन्त्रालयको आधिकारीक लेटरहेडमा प्रेस विज्ञप्ति पनि फ्याँकेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन गरेरै यस्तो झूठको खेती गर्नुको पछाडी जसरी पनि कमिशन हात पार्ने, नपरे अर्को ठेक्का आह्वान गर्दै ठूलो कमशिन माग्ने र ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम जफत गर्ने रणनीतिमा सचिव थिए । यहि व्रिफिङ मन्त्रीलाई पनि गरेका थिए । ‘यो प्रकरणमा मैले भनेजस्तो गर्नू, सबै कुराकानी म मिलाउँछु’ भनी उनले मन्त्रीलाई आश्वस्त पार्ने कोशिश गरेका थिए । तर, मन्त्री मगर यहि प्रकरणले बद्नाम हुने बाटोमा लागेकी थिइन् ।
डिआरबीले निर्देशन गरेको ३५ करोड मात्र होइन, बाँकी १५ करोड धरौटीवापतको रकम व्याजसहित दिनका लागि मन्त्रालय तयार भएको छ । उक्त रकम भुक्तानी लिनका लागि सीएमसीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत पाउलो पोर्सेल्ली आइतबार साँझ काठमाडौं आइसकेका छन् । सोमबार सरकारसँग उनीसहित सीएमसीका प्रतिनिधिको वार्ता भयो । सीएमसीसँग उप र सहायक ठेकेदारीको काम गरेका ४४ वटा कम्पनीले भुक्तानीका लागि दबाब दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
२७ माघमा काठमाडौंमा आइपुग्नुपर्ने मेलम्ची आयोजना ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले माग गरेको ३५ करोड नपाएका कारणले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न बाध्यकारी भएको थियो । फिडिक ठेक्काअनुसार ठेकेदारले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, रिटेन्सन, पर्फमेन्स बन्ड, अन डिमान्ड बन्डलगायत नौं प्रकारका धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सचिव ठाकुरले धरौटी जफत गर्ने तरिका अपनाई अर्को ठेक्का आह्वानको तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची प्रकरणमा मिहिन ढंगले बुझेपछि सीएमसीलाई नै काम लगाउन रकम तुरुन्त भुक्तानीका लागि ठाडो आदेश दिएका थिए । रकम पाएपछि आयोजनाको बाँकी काम सीएमसीले गर्ने भएको छ । डीआरबीले भनेको पैसा नदिने, उल्टै धरौटी जफत गरी खानेपानी सचिव ठाकुरले कानुनी रुपमा ठेकेदारलाई माथि पारेका थिए । ठेकेदारले मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) को काम सुरु गरेकै छैन । काम अहिले सुरु गर्दा तोकिएको मितिमा भने पानीचाहिँ आउने छैन ।
ठेकेदार कम्पनीले स्पष्ट भनेको छ– तोकिएको समयमा पानी आउन सक्तैन । अर्थात्, अब काम सुरु भए पनि २७ माघमा काठमाडौंमा पानी ल्याउन सम्भव छैन । यसबीचमा सरकारका कारण रोकिएको काम अवधिको क्षतिपूर्ति तिर्नका लागि सीएमसी तयार छैन । तर, काम गर्न भने तयार छ । बरु, रोकिएको समयको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिनुपर्ने उसको अडान छ । त्यसबाहेक काम सक्नासाथ धरौटीमा राखिएका सबै रकम फिर्ता हुनुपर्ने सीएमसीको माग पनि छ । अन्यथा सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने उसको चेतावनी छ ।